Apple inoda ingangoita mamirioni 80 iPhone 7 inogadzirwa gore risati rapera | IPhone nhau
Zuva hongu, zuva ratiri kukuratidzirai ma renders, mapikicha, madhirowa, madhayagiramu ... muchisimbisa kuti ese achave ari anotevera iPhone 7. Panouya nguva apo zvakanakisa zvatingaite kuenda kupfuura zvese izvi fungidziro kusvika zuva rekuratidzira nzira dzeiyo iPhone. Pedyo nezuva iro, huwandu hwekudonha hungangodaro hwakaderera zvakanyanya uye izvo zvakaburitswa chaizvo ndiyo yekupedzisira modhi Zvakawanda zvakadii zvatiri kumirira kubvira mukufungidzira nekutevera tsika, Apple inofanirwa kushandura dhizaini, kunyangwe runyerekupe rwazvino ruchiratidza kuti kunyangwe iyo iPhone 7s kana 8 Apple haizodzokere kugirazi, ichipa inoenderera dhizaini mune ino inotevera modhi.
Sekureva kwezvehupfumi hweTaiwanese hwezuva nezuva hwehupfumi hweDaily News uye maererano neruzivo rwakazviwana kubva kune vakasiyana vanotengesa vekambani, Apple yakumbira huwandu hwakawanda hwezvigadzirwa zvakagadzirwa gore risati rapera. Zvinoenderana nezvakapihwa nevaongorori, Apple inofanirwa kuodha mayuniti kuti agone kugadzira angangoita mamirioni makumi matanhatu nemashanu, asi zviri pachena kuti Cupertino-based kambani inoda kuwedzera huwandu hwemidziyo inogadzirwa gore risati rapera, kunyangwe iri iPhone 7 kana iPhone 7 Plus, uye inoda kuti mitsara yekugadzira iiswe mukushanda.Yakawanda sei isati yashanda kuti ugone kugadzira pakati pe72 uye 78 mamirioni ePhones.
Iyi odhi ndiyo yepamusoro soro yakaitwa neApple mumakore maviri apfuura, kunyangwe yakakwira kupfuura payaigadzirira kuvhurwa kweiyo iPhone 6 uye 6 Plus iyo ma75 mamirioni mayuniti akatengeswa mukota yekupedzisira yegore. Sekureva kwemushumo uyu Foxconn acharamba achiunganidza iPhone 7 uye iPhone 7 Plus, kunyangwe mukugadzirwa kwemuenzaniso uyu unotsigirwa naPegatron Corp. Iyi data yekugadzira kusiyana nezvinotarisirwa zvakaderera zvekutengesa zvekambani inokoshesa mudziyo. Zvichida Apple yakanyatsogadzirira chishamiso kwatiri kuvhurwa kweiyo iPhone 7 sekuvimbiswa kwaTim Cook mavhiki mashoma apfuura. Kusvikira zuva rekuratidzwa zviri pamutemo hatisi kuzosiya zviri pamutemo kusahadzika, kunyangwe isu tichizoramba tichitaura makuhwa ari kubuda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Apple inoda kusvika makumi masere emamiriyoni eApple 80s akagadzirwa mukupera kwegore